खेलकुद | Digital Dainik
नयाँ प्रशिक्षण विधि चाहियोः पासर खड्का काठमाडौं, असोज २७ : राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले नेपालको लक्ष्य टी–२० विश्वकप भएको बताएका छन् । त्यसको पहिलो खुड्किलोका रुपमा रहेको एसिया छनोट ‘बी’मा च्याम्पियन भएको नेपाली टोली शनिबार स्वदेश फर्किएको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कप्तान पारस खड्काले भने, ‘हाम्रो पहिलो चाहना टी–२० विश्वकप खेल्नु हो । पहिलो खुड्किलो पार गरेका छौं । आशा छ, बाँकी दुई खुड्किलो पनि पार गर्नेछौं ।’ अब नेपालले एसिया फाइनल खेल्नेछ, जहाँ एसिया छनोट ‘ए’बाट आएका यूएई, कतार र कुवेत तथा बीबाट आएका नेपाल, सिंगापुर र मलेसियाबीच …
पारस खड्काको चौथो विकेट, नेपालको आठौ सफलता
पारस खड्काको चौथो विकेट, नेपालको आठौ सफलता काठमाडौं, साउन १६ : नेपालले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेटमा नेदरल्याण्ड्सविरूद्ध बलिङ गरिरहेको छ। नेदरल्याण्डस्‌कै घरेलु मैदानमा टस हारेर पहिले बलिङ गरिरहेको नेपालले आठौं सफलता हात पारेको छ। नेपालका लागि कप्तान पारस खड्काले व्यक्तिगत चौथो विकेट लिएका छन्। यसअघि सोमपाल कामीले २ तथा बसन्त रेग्मी र सन्दिप लामिछानेले १-१ विकेट लिए। सोमपाल कामीले खेलको तेस्रो ओभरमा डानिएल ब्राकको विकेट लिँदै नेपालको लागि पहिलो ओडिआई विकेट लिने खेलाडीको कीर्तिमान बनाए। ब्राकलाई १ रनमै गुमाएको डच टोलीका लागि माइवर्ग र कुपरले तेस्रो विकेटका लागि ४५ रनको …
विश्वकपमा सबैभन्दा बढि गोल गर्ने किर्तिमान बनायो ब्राजिलले
विश्वकपमा सबैभन्दा बढि गोल गर्ने किर्तिमान बनायो ब्राजिलले काठमाडौं, असार १९ : ब्राजिलले विश्वकप फुटबलमा गोलको नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। पाँच पटकको विश्व विजेता ब्राजिलले विश्वकप फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने टोलीको नयाँ कीर्तिमान बनाएको हो। ब्राजिलले विश्वकप २२८ गोल गरेसँगै नयाँ कीर्तिमान बनाएको हो। रसियामा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणको खेलमा सोमबार मेक्सिकोविरूद्ध २ गोल गर्दै उक्त कीर्तिमान बनाएको हो। यसअघि जर्मनीको नाममा २ सय २६ गोलको कीर्तिमान रहेको थियो । आज ब्राजिलका लागि २२७औं गोल नेयमारले गरे भने २२८ औं गोल फिर्मिनोले …
मेसी, रोनाल्डो र नेयमार विर्साउने विश्वकपका नयाँ स्टार काठमाडौं, असार १७ : रुसमा भइरहेको विश्वकपमा उपाधिको दाबेदार मानिएका दुई हेभिवेट टिम अर्जेन्टिना र फ्रान्सबीच शनिबार बेलुका भएकोको प्रिक्वार्टरफाइनल खेललाई धेरैले चासोको साथ हेरेका थिए । एकातिर लियोनेल मेस्सीको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिनाको टिम र अर्कोतिर युवा खेलाडीहरुले भरिएको फ्रान्सबीचको खेल धेरै नै रोमाञ्चक रहृयो । गोलको वर्षा नै भएको उक्त खेलमा एक १९ वर्षका ठिटोले सनसनी मच्चाए । काजानमा भएको खेलमा फ्रान्सले अर्जेन्टिनामाथि ४-३ को जीत हात पार्दा फ्रान्सका युवक केलियन एमबाप्पे खेलको नायक बने । जीत हात पार्ने क्रममा उनी एक्लैले २ गोल गरे भने अर्को एक …
विश्वकपमा अन्तिम १६ को समिकरण पुरा, को को पुगे ?
विश्वकपमा अन्तिम १६ को समिकरण पुरा, को को पुगे ? काठमाडौं, असार १५ : रसियामा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणको समिकरण पुरा भएको छ। बिहिबार समूह एचबाट जापान र कोलम्बिया अन्तिम १६ मा पुगेसँगै प्रि क्वार्टरफाइनलको समिकरण पुरा भएको हो। समूह चरणका सबै खेलहरू बिहिबार रातिबाट सकिएका छन्। समूह चरणका खेल सकिँदा पहिलो पटक विश्वकप खेलेका आइसल्याण्ड तथा पानामा र साबिक विजेता जर्मनीसहित १६ टिम बाहिरिएका छन्। अब शनिबारदेखि नकआउट चरणका खेल सुरु हुनेछन्। यसपटक नकआउट चरणमा अफ्रिकन टोली भने ‘निल’ भएका छन्। कुनै पनि अफ्रिकन टोलीले पहिलो चरण पार गर्न सकेनन्। युरोपबाट १० टोली, दक्षिण अमेरिकाबाट चार …
टप १६ टिममा परेपछि मेस्सीले भने, ‘हामीलाई ठूलो राहत मिल्यो’
टप १६ टिममा परेपछि मेस्सीले भने, ‘हामीलाई ठूलो राहत मिल्यो’ काठमाडौं, असार १३ : लिओनल मेस्सी भन्छन्, उनलाई यसअघि यस्तो पीडा भएको याद छैन । जबकी प्रशिक्षक जर्ज साम्पाओलीलाई ठूलो राहत मिलेको छ किनकी नाइजेरियामाथि रोमाञ्चक जित हात पार्दै अर्जेन्टिना विश्वकपको नकआउट चरणमा पुगेको छ । दुई पटकको विश्व च्याम्पियन अर्जेन्टिना त्यस बेलासम्म विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिने खतरा थियो, जबसम्म म्यानचेष्टर युनाइटेडका मार्कोस रोजेले भली गोल गरेनन् । ८६ औं मिनेटमा उनले गरेको उत्कृष्ट गोलले अर्जेन्टिना २-१ ले विजयी मात्र भएन, विश्वकपको अन्तिम १६ मा स्थान बनाएको छ । अब उसको भेट फ्रान्ससँग हुनेछ । समूह चरणको दुई खेलमा प्रदर्शन, खलाडी …
कसरी मिस गरे रोनाल्डोले पेनाल्टी?
कसरी मिस गरे रोनाल्डोले पेनाल्टी? काठमाडौं, असार १२ : विश्वकपमा समूह ‘बी’ मा अन्तिम खेल धेरै कुराले रोमाञ्चक रहृयो । मोरक्कोसँग हार्नै लागेको स्पेन, इरानअघि कमजोर देखिएको पोर्चुगल, अन्तिम समयको गोल, क्रिष्टियानो रोनाल्डोको पेनाल्टी र पहेँलो कार्डले दर्शक जुरुक्क उचालिए । खेलमा पोर्चुगलले इरानसँग सोमबार राति भएको खेलमा १(१ को बराबरीमा रोकियो । पोर्चुगलका लागि रिकार्डो करिज्माले पहिलो हाफको अन्तिममा गोल गरे । अघिल्ला दुई खेलमा चार गोल गरेर चम्किएका रोनाल्डो इरानविरुद्ध कमजोर बने । उनले पाएको पेनाल्टी पनि सदुपयोग गर्न सकेनन् । इरानका साइद एजातोलाहीसँगको ट्याकलको क्रममा रोनाल्डो लडेका थिए …
विश्वकप फुटवल आजदेखि सुरु
विश्वकप फुटवल आजदेखि सुरु काठमाडौं, जेठ ३१ : रसियामा आजदेखि विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुदैँछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज आयोजक रसिया र साउदी अरेबिया भिड्दैछन्। खेल मस्को स्थित राष्ट्रिय रंगशाला लुजनेकीमा हुनेछ। फिफा वरियता अनुसार विश्वकपमा सहभागि रसिया सबैभन्दा कमजोर मुलुक हो। तर आयोजक र समर्थकका हिसाबले रसिया फाइदामा रहनेछ। रसिया फिफा वरियतामा ७० औँ स्थानमा छ भने साउदी अरेबिया ६७ औँ स्थानमा छ। सन् २००८ मा युरोपियन च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलसम्मको यात्रा नै रसियाको फुटबलमा अहिलेसम्मको उपलब्धि हो। रसिया आयोजक राष्ट्रका हैसियतमा मात्र विश्वकप फुटबलमा छनौट भएको …